Madaxweynihii Madrid Oo Ka Hadlay Haddii Hazard Imaanayo Spain. – Radio Daljir
Madaxweynihii Madrid Oo Ka Hadlay Haddii Hazard Imaanayo Spain.
Maarso 28, 2017 7:27 g 0
Kooxda Real Madrid ayaa si wayn u doonaysa in ay dhamaadka xili ciyaareedkan baankeeda u jabiso saxiixa xidiga xulka qaranka Belgium iyo kooxda Chelsea ee Eden Hazard. Florentino Perez iyo Zinedine Zidane ayaa doonaya in xili ciyaareedkan danbe ay kooxdooda Los Blancos ku haystaan Eden Hazard, laakiin madax waynihii hore ee kooxda Real Madrid ee Ramon Calderon ayaa aaminsan in go’aanka Eden Hazard uu kaga bixi karo Stamford Brdige aanu ku xidhnaan doonin diidmada Chelsea.
Ramon Calderon oo la hadlayay TalkSPORT ayaa sheegay in Chelsea ayna ahayn koox ciyaartoydeeda muhiimka ah iska iibisa balse bixitaanka Eden Hazard in uu ku xidhan yahay rabitaanka xidiga ree Belgium haddii uu doonayo in uu joogo Blues iyo haddii uu Real Madrid ku biirayo.
Ramon Calderon oo ka hadlaya Chelsea iyo sida ayna u ogolaan doonin bixitaanka Hazard balse rabtiaanka xidigani uu muhiim yahay ayaa yidhi: “Chelsea ma aha koox iib, sidaa daraadeed wax sahlan ma noqon doonto, laakiin markasta sida ay tahay waxay ku xidhnaan doontaa rabitaanka ciyaartoyga. Haddii uu doonayo in uu baxo, isagu wuu bixi doonaa, taas ayaa markasta ah wax jira”.